Football Khabar » ‘मोटो जरिमाना’सहित मेस्सीमाथि ३ महिना प्रतिबन्ध : कति खेल गुमाउँछन् ?
‘मोटो जरिमाना’सहित मेस्सीमाथि ३ महिना प्रतिबन्ध : कति खेल गुमाउँछन् ?
दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ (कन्मेबल) लाई ‘भ्रष्ट संस्था’को आरोप लगाउने अर्जेन्टिनी फुटबल टोलीका कप्तानसमेत रहेका सुपरस्टार लिओनल मेस्सीमाथि लामो प्रतिबन्ध लागेको छ । उनलाई संघले आर्थिक जरिमानासहित ३ महिनाको प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गरेको हो ।
गत महिना ब्राजिलमा भएको कोपा अमेरिकामा मेस्सीले खेल दौरान उत्तेजित भएर आयोजक र खेल खेलाउने रेफ्रीको आलोचना गर्दै आयोजकलाई भ्रष्ट संस्था भएको आरोप लगाएका थिए ।
सोही आरोपमा महासंघले ३ महिनासम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसैगरी, मेस्सीबाट ५० हजार अमेरिकी डलर (५५ लाख नेपाली रुपैयाँ) आर्थिक जरिमानासमेत भराउने निर्णय महासंघले गरेको छ ।
महासंघले अफिसियल रूपमा एक विज्ञप्ति निकालेर मेस्सीमाथिको कारबाहीको पुष्टि गरेको छ । महासंघले कोपामा तेस्रो स्थानका लागि चिलीविरुद्धको खेलक्रममा मेस्सीले विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको विषयमा कारबाही गरेको जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्तिमा मेस्सीको अभिव्यक्तिगबाट प्रतियोतिाको गरिमा, आयोजक संस्थाको छविमा गम्भीर आँच पुगेको पनि जनाएको छ ।
कोपामा सेमिफाइनलमा ब्राजिलसँग भएको खेलमा अर्जेन्टिना २–० ले हार्दा पनि मेस्सीले ‘खेलका रेफ्रीले ब्राजिललाई जिताउने गरी सघाएको’ भन्दै रेफ्रीको आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि तेस्रो स्थानका लागि चिलीसँग भएको खेल दौरान मेस्सी चिलीका कप्तान ग्यारी मेडेलसँग जुधेपछि रातो कार्ड खाँदै ३७औं मिनेटमा बाहिरिएका थिए । दुवैलाई रातो कार्ड दिइएको थियो ।
खेलपछि मेस्सीले ‘कोपा आयोजक भ्रष्ट संस्था भएको’ र ‘कोपा ब्राजिललाई जिताउन सबै सेटिङ भएको’ आरोप लगाएका थिए । उनले ‘आफू भ्रष्टाचारको अंग नबन्ने’ भन्दै तेस्रो स्थानका लागि जितेको मेडल लिनसमेत अस्वीकार गरेका थिए ।
यो प्रतिबन्धपछि अब मेस्सीले ३ महिनासम्म अर्जेन्टिनी टोलीबाट कुनै पनि खेल खेल्न पाउनेछैनन् । प्रतिबन्ध अगस्ट ३ देखि लागू हुनेछ । यो अवधिमा मेस्सीले तीन मैत्रीपूर्ण खेल मात्रै गुमाउनेछन् । उनले चिली, मेक्सिको र जर्मनीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न पाउनेछैनन् ।
मेस्सी सन् २०२२ को विश्वकपका लागि हुने छनौट खेल खेल्न भने उपलब्ध हुनेछन् । यसअघि मेस्सीमाथि ६ महिनासम्मको प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना थियो । तर, महासंघले मेस्सीमाथि न्यूनतम् कारबाही मात्रै गरेको हो ।
दुई साताअघि नै महासंघले मेस्सीले चिलीविरुद्धको खेलमा पाएको रातो कार्डका लागि १५ सय रुपैयाँ अमेरिकी डलर र एक खेलको प्रतिबन्धको फैसला गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति १८ श्रावण २०७६, शनिबार ०२:०२